के भन्छन् ह्याकरको निशानामा परेका ८ कलाकार ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
के भन्छन् ह्याकरको निशानामा परेका ८ कलाकार ?
सुमित्रा लुईंटेल || 31 March, 2021
भर्खरै अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौला र बरिष्ठ अभिनेता सरोज खनालको फेसबुक ह्याक भयो । र, यसका लागि यी दुवै कलाकारले प्रहरीको साथ र सहयोग खोजे । प्रहरीले केही दिनमा सवै ठीक हुन्छ भनेर उनीहरूलाई आश्वस्त पारेको छ ।
दीपाश्री र सरोज खनाल पछिल्ला उदाहरण हुन् । तर धेरै कलाकार ह्याकरको सिकार भइसकेका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप आदि ह्याक हुने क्रम बढिरहेको प्रहरीको दावी छ । कलाकारहरूको अनुभव सुन्ने हो भनेपनि ह्याकरहरू सक्रिय भएको बुझ्न सकिन्छ ।
फेसबुक तथा अन्य सामाजिक सञ्जालहरू ह्याक भएका नेपाली कलाकारहरू को को छन् ? ह्याक भएको स्वीकार्ने यी ८ कलाकारहरूको अनुभव यस्तो छ –
नीता ढुङ्गाना – सवक सिकेँ
अभिनेत्री नीता ढुङ्गाना एक लोकप्रिय अभिनेत्री हुन्, जो सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सक्रिय छिन् । उनको फेसबुक ६ असोज २०७६ मा ह्याक भएको थियो । म्यासेन्जरमा आएको एक लिंक खोल्दा उनको फेसबक ह्याक भएको उनले बताइन् ।
फेसबुक ह्याक भएपछि साईबर ब्युरोमा उजुरी गरेको १५ देखि २० दिन पछि बल्ल उनको फेसबुक सुचारु भएको थियो । फेसबुक ह्याक गर्ने व्यक्ति पत्ता लागेर उसलाई सजाय पनि भएको उनी बताउँछिन् ।
‘फेसबुक ह्याक हुने प्रक्रिया अहिले बढ्दो छ । जब मेरो फेसबुक ह्याक भयो, तब मैले एउटा कुरा भने सिकेँ’, उनी भन्छिन्, ‘फेसबुकमा कुनै पनि प्रकारको महत्वपूर्ण कुराहरू भने गर्नु हुँदैन रहेछ । यसो सामान्य हेलो हाई गर्नको लागि मात्र फेसबुक प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ ।’
सविन श्रेष्ठ – धेरै नै तनाव भएको थियो
अभिनेता सविन श्रेष्ठको फेसबुक आईडी पनि २०७६ सालमा ह्याक भएको थियो । बेलुका फेसबुक चलाउँदै गर्ने क्रममा २ मिनेटको लागि छोडेर फेरि हेर्दा उनको फेसबुक लगआउट भएर आईडी ह्याक भएको थियो । फेसबुक आईडी ह्याक भएको दिन ३२ पटक प्रयास गर्दा पनि उनको आईडी नखुलेपछि दोस्रो दिन अर्को साथीको आईडीबाट हेर्दा फेसबुकमा प्रोफाइल फोटो र नाम परिर्वतन भएको थियो ।
साइबर ब्युरोमा रिपोर्ट गरेर साथीहरूको आईडीबाट फेसबुकमा उजुरी गर्दा पनि आफ्नो आइडीको फेसबुक नचलेको उनी बताउँछन् । ह्याक गर्ने व्यक्तिले ५० हजारको माग गरेको थियो । पछि नयाँ आईडी बनाएर पुरानो आईडी चलाउन बन्द गरेको सबिन बताउँछन् ।
‘त्यो फेसबुक ह्याक हुदाँ एकप्रकारको तनाव भएको थियो, किनकी बिजनेसको पर्सनल म्यासेजहरू त्यसमा थियो,’ उनी भन्छन्, ‘पैसाको कुराभन्दा पनि आईडीबाट कसैलाई नराम्रो म्यासेज गर्देला, कसैलाई गाली गर्ला, नराम्रो भिडियो पठाउला कि भन्ने तनाव भएको थियो ।’
सरिता लामिछाने, ऋषि लामिछाने – निर्भर हुन नहुने रहेछ
त्यस्तै २०७५ सालमा अभिनेत्री सरिता लामिछानेको पनि फेसबुक आईडी ह्याक भएको थियो । फेसबुक चलाउने क्रममा उनले निर्देशक तथा पति ऋषि लामिछानेको आईडी नदेखिएपछि तपाईको फेसबुक ह्याक भएको जस्तो छ भनिन् । ऋषिजीको फेसबुक ह्याक भएको सूचना राखेको २ मिनेटपछि उनको पनि फेसबुक आईडी ह्याक भयो ।
फेसबुक ह्याक भएको उजुरी गर्न साईबर ब्युरो पुग्दा दुवैको फेसबुक ह्याकरबाट डिएक्टिभेट भइसकेको थियो । उनी भन्छिन् ‘फेसबुक ह्याक हुँदा एक प्रकारको तनाव भने हुँदो रहेछ किनकी हजारौं फलोअर जोडिएका थिए फेसबुकमा । पछि ती सबै फलोअर जोडिन गाह्रो भयो । फेसबुक सुरक्षित छ भनेर त्यसमा विभिन्न डकुमेन्ट, फोटोहरू राखिएको थियो, ती सबै डिलिट भए । यसमा निर्भर हुनुहुन्न भन्ने कुराको ज्ञान पनि पाईयो । ’
झरना थापा, सुनिल कुमार थापा – आधा घण्टा ह्याक भयो
ह्याकरको फन्दामा अभिनेत्री÷निर्देशक झरना थापा पनि परिसकेकी छिन् । उनको फेसबुक ह्याक हुनुभन्दा केही दिन अघि उनको पति तथा निर्माता सुनिल कुमार थापाको पनि फेसबुक ह्याक भएको थियो ।
करिब दुई वर्ष अघि ह्याक भएको उनको फेसबुक दोस्रो दिन नै आईटी जानेका उनका एक भाईको मद्दतले पूर्ण सुचारु भएको थियो । भन्छिन्, ‘त्यसबेला उजुरी गर्न जानुपर्ने वातावरण नै सिर्जना भएन ।’
जन्मदिनमा यही १४ चैतमा पनि उनको फेसबुक आईडी करिब आधा घन्टा ह्याक भएको थियो । भन्छिन् ‘यो पटक मेरो मेल आईडी गुगलबाट भेरीफिकेसन भइसकेको थियो । त्यसैले पनि ह्याक हुन पाएन ।’
दीपाश्री निरौला– छिटै बन्छ भन्ने आशा छ
अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको फेसबुक पनि ह्याक भएको एक साता भएको छ । १२ चैतमा उनको फेसबुक ह्याक भएको थियो । ह्याकरले उनको फेसबुकबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई म्यासेज गरेर पैसा माग्ने कार्य गरेको पनि उनले बताएकी छिन् ।
फेसबुक एक साता भित्रमा सुचारु हुने जानकारी प्रहरी प्रशासनबाट पाएको उनले बताइन् । निरौला भन्छिन् ‘मेरा हजारौं फलोअर्स थिए । उनीहरूसँग कुरा गर्न नपाउँदा नराम्रो लागेको छ ।’
सरोज खनाल– ह्याकरले पैसा मागेको थियो
अभिनेता सरोज खनालको फेसबुक पनि अभिनेत्री दीपाश्री निरौला संगसंगै सोही दिन ह्याक भएको थियो । उनको फेसबुक ह्याक गरेर उनको आईडीबाट पनि ह्याकरले विभिन्न व्यत्तिहरूसँग पैसा मागेको उनले बताएका छन् ।
आईडी बन्न अझै एक साता जति समय लाग्ने जानकारी प्रहरी प्रशासनले दिएको उनले बताए । ह्याकरले पैसा मागेर दुःख दिने क्रम पनि हिजोबाट अलि कम भएको उनले बताए ।
कलाकारहरू साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, अशिष्मा नकर्मी र नाजिर हुसेनले चलाइरहेको सामाजिक सञ्जाल पनि ह्याक भएका थिए । यीवाहेक अरु धेरै कलाकार पनि ह्याकरको निशानामा परिसकेका छन् । त्यसो त नायिका पूजा शर्माको पनि फेसबुक आईडी ह्याक भएको थियो । तर अहिले उनी यसलाई स्वीकार्दिनन् ।
कोलम्बियाकी प्रख्यात गायिका साकिरा जहिल्यै आफ्ना गीतका कारण चर्चामा आइरहन्छिन् । उनका हरेक गीत उत्तिकै लोकप्रिय हुन्छन् । तर ,अहिले